Sida loo Play MKV on PS3 Si fudud
Sida Console ah kulanka video weyn, PlayStation3 (PS3) uu aad u badan oo ah wax kasta, boqolaal kulan, goodhiyaha playable xor ah oo tan oo ah iyadana. Muuqaal kale oo waa inuu u ciyaaro gaar ahaan videos. Nasiib darro, MKV ma aha mid iyaga ka mid ah. Sidaas waxa dhab ahaan haddii aad rabto in aad ka ciyaari MKV on PS3?
- Halkan xal loo helo Wondershare Video Converter si weyn lagu talinayaa. Waxaa qoreysa shaqada Server Media kaas oo awood kuu toos ah qulquli videos MKV in PS3 aan diinta. Halkan waxaan ku tusi doonaa geeddi-socodka oo dhan sida ay u gudbiyaan files MKV si aad u PS3 u siman loo maqli karo si faahfaahsan, iyo sidoo kale talooyin dheeraad ah si loo sii qulquli warbaahinta in TV .
Taageerada ilaa 150 qaabab file kala duwan, oo ay ku jiraan MKV.
The plugin Media gooya kaa caawinaysaa in aad si toos ah u sii qulquli videos MKV in PS3.
Waxaa la dhisay-in downloader online sidoo kale kaa caawinaysaa in aad ka soo dejisan iyo MKV il toos gudbiyo.
Talaabada 1: Isku aad PC iyo PS3 shabakad isku
First dhigay aad PS3 iyo in la hubiyo in aad PC iyo Console ku xiran yihiin shabakad isku mid ah.
Talaabada 2: Daahfurka Server Media
Double guji icon toobiye ee Server Media ku saabsan desktop. Marka laga furay, Server Media si toos ah lagu ogaan doonaa qalabka hoorto laga heli karo shabakadda. Halkan waxaad waxaad dooran kartaa Console PS3 ka hoose ee suuqa kala hoose.
Tallaabo 3: Ku dar files MKV in Server Media
Markaas waxaad ku dhuftay kartaa "Add Files" button in caleenta iyo dajiyaan files MKV aad. Waxa kale oo aad eegi kartaa xulashada Computer si ay si toos ah aad u heshaan files leh Server Media.
Dul istaagin ee file ah oo "Play on TV" icon muuqan doonaa. Just guji icon iyo suuqa kala Streaming ka arbushin ilaa doona. Dhowr ilbiriqsi ka dib, file MKV aad la huleeshay doonaa PS3. Markaas xakamayn karto habka loo maqli karo ay la qabsado mugga ama gefo cutubka. Waxaad sidoo kale riixi kartaa "T" badhanka si ay u doortaan subtitles ama xitaa soo bixi iyo subtitles la socosho si toos ah.
Sida loo sameeyo Video ah Screen Multi
> Resource > Video > Sida loo Play MKV on PS3